Light Globe, Finday ary Fanorenana Batterie - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Ny Central Coast Council dia manana programa fanodinana maimaim-poana ho an'ny mponina mba hampiditra ny batteries an-tokantranony tsy ilaina (toy ny AA, AAA, C, D, 6V, 9V ary batteries bokotra), globe maivana, finday ary fantsona fluorescent amin'ny toerana fanangonana voatendry.
Ny bateria sy ny jiro fluorescent dia misy singa manimba toy ny mercury, alkaline ary asidra firaka, izay mety hiteraka loza lehibe amin'ny tontolo iainana. Mety hampidi-doza ho an'ny fahasalamana ihany koa izy ireo raha ariana.
Azafady, azafady - Aza apetraka ao anaty dabam-pako amin'ny ankapobeny ireo entana ireo, fa mety hirehitra amin'ny kamiao mpanangom-pako na eo amin'ny toerana fanariantsika. Ny fantsona fluorescent sy ny globe maivana dia tsy maintsy madio sy tsy tapaka mba ekena.
Ny bateria, ny globe maivana ary ny finday (sy ny kojakoja) dia azo alefa amin'ny:
Fitantanana ny fako – Buttonderry sy Woy Woy
Tranoben'ny fitantanan-draharaha, Wyong (50 Hely Street, Wyong).
Ny fantsona fluorescent dia azo alefa ao amin'ny Buttonderry Waste Management Facility and Councils Administration Building ao Wyong.
Ny fanodinana maimaim-poana ny bateria sy ny jiro dia azo atao amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola amin'ny alàlan'ny hetsika NSW EPA's Waste Less, Recycle More.